A na-azụta Dolls European na Storelọ Ahịa Urdolls
Mmekọahụ mmekọrịta nwoke na nwanyị na Europe maka ọrịre na USA
Nabata ụwa nke ụdị bebi mmekọahụ nke ndị Europe. Anyị nwere ụmụ bebi ndị kachasị ewu ewu ebe a, anyị na-emelite ndị ọhụrụ mgbe niile. Anyị na-ekwe nkwa na ụmụ bebi niile dị ọhụụ ma dị elu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ngwaahịa ndị afọ juru gị, biko kpọtụrụ anyị. Anyị kwenyere na anyị agaghị ahapụ gị.
Zụrụ ụmụ bebi nwoke na nwanyị na Europe na Urdolls